Ny lamasinina fizahan-tany manintona dia mankany amin'ny tendrony Afrika
Home » Vaovao momba ny dia lavitra » Ny lamasinina fizahan-tany manintona dia mankany amin'ny tendrony Afrika
Jolay 20, 2017
Fantatra amin'ny anarana hoe Pride of Africa, ny fiaran-dalamby mpizahatany Rovos Rail dia nandao ny tanànan'ny tanzania Dar es Salaam nankany Cape Town ny folakandron'ny talata teo, namakivaky ny làlamby Tanzania sy Zambia mahatalanjona mankany Cape Town, eo amin'ny tendrony kaontinanta afrikanina.
Ny fiarandalamby, Pride of Africa, dia nandao ny renivohitr'i Tanzania tamin'ny 12 ora alina, nihodinkodina nankany Cape Town, namakivaky an'i Tanzania, Zambia, Zimbabwe, ary Botswana alohan'ny nidirany tany Afrika Atsimo.
Rehefa avy nandao an'i Dar es Salaam, ny lamasinina dia namakivaky ny Selous Game Reserve, ilay valan-javaboary be indrindra voaro sy feno ala indrindra eto Afrika mandrakotra velaran-tany 55,000 kilometatra.
Nandritra ny ora vitsivitsy, ireo mpizaha tany ao anaty fiaran-dalamby dia afaka mijery biby dia amin'ny alàlan'ny mpanazatra vita amina fitaratra natao ho fizahana toerana raha mbola mandeha ny lamasinina.
Udzungwa Ranges sy ny Great Great Rift Valley any Afrika no manintona mpizahatany hafa misarika ireo mpandeha lamasinina handray ny fomba fijery. Miampita ny riandranon'i Chisimba any Zambia ny lamasinina izay ahitan'ny mpandeha mijery ny riandrano mahafinaritra.
Tonga tao Livingstone, ny fiaran-dalamby dia niampita ny tetezana ary tonga tany amin'ny sisintany Zimbaboeana hamangy fitsidihana any amin'ny Victoria Falls tsy manam-paharoa miaraka amin'ny fitsangantsanganana an-dranomasina amin'ny ony Zambezi sy safari mandeha avy eo amoron'ny renirano mankany amin'ny hotely.
Ny fotoam-pialam-boly ao amin'ny Victoria Falls dia misy ny hetsika toy ny fitsidihana ny riandrano lehibe, angidimby iray eo ambonin'ireo riandrano, safira miverina elefanta, fitsangantsanganana miaraka amin'ny liona, rafting rano fotsy, fitsambikinana bungee, ary golf.
Ireo mpizahatany mitaingina ny fiaran-dalamby, rehefa nandao ny fianjeran'i Victoria, dia nahazo fotoana ihany koa nitsidika ny Valan-javaboary Hwange talohan'ny nandehanan'izy ireo tany Bulawayo, tanàna faharoa lehibe indrindra ao Zimbabwe.
Any Botswana, ny fiaran-dalamby dia mianatsimo mianatsimo amin'ny alàlan'ny Francistown sy Serule, mamakivaky ny Tropic of Capricorn ary mitohy hatrany Mahalapye ka hatrany Gaborone izay ivoahan'ny mpizahatany hanao fitsidihana ny Madikwe Reserve miaraka amin'ny fijanonana 2 alina amin'ny trano fisakafoanana. Fandehanana lalao vao maraina, familiana lalao antoandro, ary hetsika hafa ho an'ny vahiny no manamarika ny andro ho an'ny mpizahatany Rovos Rail.
Avy eo amin'ny Madikwe Reserve sy Magaliesberg Mountains, mpizahatany dia mandeha am-pilalaovana maraina maraina alohan'ny handehanan'ny bibilava indray, mamakivaky ny Tendrombohitra Magaliesberg, tandavan-kavoana somary ambany 120 kilometatra atsinanana andrefana avy any Pretoria ka hatrany Rustenberg any Afrika Atsimo.
Kimberley Big Hole sy ny tranombakoka Diamond Mine dia tranokala mahasarika olona nataon'ireo mpizahatany tao amin'ny fijanonanan'ny Rovos Rail hitsidihana. Avy amin'i Kimberly, ny fiaran-dalamby dia mankany Beaufort Andrefana avy eo Matjiesfontein, tanàna manan-tantara mendrika fitsidihana mpizahatany.
Miala ho any Cape Town ny lamasinina amin'ny alàlan'ny Reniranon'i Touws sy Worcester ho an'ny fijanonany farany rehefa avy namakivaky ny antsasaky ny kaontinanta afrikanina tao amin'ny epic 15 andro, fitsangatsanganana an-tsokosoko antsasaky ny kaontinanta afrikanina mba hanatanterahana ny "Dream of Cecil Rhodes" ny Cape hatrany Kairo.
Ny fiaran-dalamby Rovos Rail dia manaraka ny lalan'i Cecil Rhodes avy any Cape, mamaky an'i Afrika atsimo mankany Dar es Salaam ary mampifandray ireo mpandeha aminy amin'ny faritra hafa any Afrika amin'ny alàlan'ny tambajotram-by any Afrika Atsinanana.
Ny fiaran-dalamby taloha, Edwardian Rovos Rail dia mihodina miaraka amina mpanazatra hazo 21 afaka mahazaka mpandeha 72. Ireo mpanazatra hazo tranainy dia eo anelanelan'ny 70 ka hatramin'ny 100 taona, ary efa natokana ho any anaty kalesy mendrika ny mpandeha.
Tompon'ny Rovos Rail Company, ny lamasinina taloha dia nanao diany voalohany tany Dar es Salaam tamin'ny volana jolay 1993 mba hamita ny nofin'i Cecil Rhodes hametraka lalamby avy any Cape Town any Afrika atsimo ka hatrany Kairo any Egypt, mamaky ny kaontinanta afrikanina avy amin'ny tendrony farany atsimo mankany amin'ny tendrony avaratry ity kaontinanta ity.
Miandrandra ny fihaonambe maneran-tany ho an'ny fizahan-tany any Afrika izay atsy ho atsy amin'ny volana ho avy izao ny Rovos Rail dia toeram-pizahantany vaovao sy ho avy mampifandray ny kaontinanta afrika amin'ny alàlan'ny lalamby. Rovos Rail dia mijoro ho iray amin'ireo mpiara-miombon'antoka lehibe amin'ny fitomboan'ny fizahantany afrikanina.
Miara-miasa amin'ny Birao Fampandrosoana an'i Rwanda, ny Kongresy ATA faha-41 dia natao hametrahana ny feo amin'ny fomba azo ampiasaina ny fizahan-tany ho motera amin'ny fitomboana ara-toekarena sy ny famoronana asa amin'ny alàlan'ny maodelim-barotra vaovao, teknolojia vaovao ary fiaraha-miasa stratejika.
Ankoatra ny kaompaniam-pitaterana hisongadina mandritra ny Kongresin'ny ATA, Rovos Rail no mpiara-miombon'antoka mpizahatany vaovao mendrika hodinihina mandritra ny kaongresy, mikendry ny hampiakatra ny portfolio ny fizahantany afrikanina manerantany.
SriLankan Airlines dia mandefa sidina tsy miato avy any Hong Kong mankany Colombo